သီရိမင်္ဂလာဈေး - ၁ ~ စန္ဒကူး
သိရိမင်္ဂလာဈေးကအခုနေရာအသစ်မှာဖြစ်သွားပီ၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးကျယ်လာတယ်၊ ဖုန်တွေလဲအများကြီး၊ မနက်အစောကြီးမှာတောင် ဖုန်တွေကြီးပဲ။ အဲဒီမှာ မျက်နှာဖုံးဆွပ် ရောင်းတဲ့သူ ရှိတယ် သူတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်။
ငါးပုံတွေကြည့်ပြီး အားကျနေသူတွေအတွက်ထက်နှိပ်ဆက်တယ်မထင်ပါနဲ့၊ တို့မြန်မာပြည်က ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကို ငန်းလိုက်ပါအုံးနော်....ဟီးဟီး
ကွန်ပျူတာအသစ်မှာ မြန်မာလိုရိုက်မရလို့ ပုံတွေပဲတင်ပေးထားအုံးမယ်
Sony Viao မှာ Windows7ဖြစ်နေလို့မြန်မာလိုပဲမြင်ရပီး မြန်မာ Keyboard ပြောင်းမရဘူး သိရင်ကူညီပါ
ကူးကူး ရန်ကုန်ရောက်တုန်း ဈေးတကာ လည်နေတာပေါ့လေ ... ။
ငရုတ်သီးစိမ်း အပုံလိုက်ကို ကြည့်ပြီး လန့်သွားတယ်။ အဲလောက်များများ ပုံထားတာမျိုး တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။
ငါးခြောက်ပြားကြီးတွေ ဖုတ်ပြီး ဆီလေးဆမ်း စားလိုက်ရရင် ... အဟမ်းးး သွားရည်ကျလာပြီ။ :)
ဒီမှာ မရမ်းသီးကလွဲရင် အကုန်ရှိတယ်..
မရမ်းသီးထောင်းစားချင်ရင် စပျစ်သီးအရိုင်းတွေ ထောင်းစားနေရတယ်..အရသာတော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ၊
အဲ..ထန်းလျက်လဲမရှိဘူး..အင်ဒိုနီးရှားကလာတဲ့ ထန်းလျက်က အခဲမဟုတ်ပဲ ဆလင်ဒါလို အလုံးတွေ..
ဗမာပြည်က စပျစ်သီးကြည့်ရတာ ချူချာလိုက်တာ
ဈေးက အသီးအစုံနဲ့ ငါးခြောက်ငါးခြမ်းတွေ ကြည့်ပြီး ဈေးသွားချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ အစ်မကူးကူးရေ... ရေငန်းသီးဆိုတာ တခါမှ မစားဖူးဘူး။ ထညက်ခဲလေးတွေ မြင်တော့ တစ်လုံးလောက် ကောက်ပြီး စားချင်လိုက်တာ။ ဒီမှာ မရှိလို့း)
ဈေးကလဲ စုံနေတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပဲ။ ရေငန်းသီမြင်တော့ သွားတွေ ကျိန်းလာတယ်။ မရမ်းသီင်္းနဲ့ ငြုတ်သီးစိမ်းထောင်းစားမယ်။
ကူးကူးရေ ဈေးပုံတွေကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Yeah!!Kuu....Our country is really rich in natural resources,fruits n vege...etc,etc......But......whoever away from home miss whatever from home.Tks for sharing.
Missing home Gyidaw:(
ရေငန်းသီင်္း မရမ်းသီင်္းနဲ့ ငြုတ်သီးစိမ်းထောင်းစားလိုက်
grapes ka chu char dar hote wuu ko gyi kyaut yayy...acharrathee kyii tway shi dae,athayy lo chin dar ae lout bae ya dae...aku kaakyii kyii tway bae yaung nay dar..nge nge ka sarr phuu dae thayy layy way tway lo... wann thar arr ya yite lar dar par shin...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်း အရသာရှိတယ်၊ လတ်ဆတ်တယ်.. တကယ်ပါပဲ...